Fanoloran-tena misimisy kokoa
“Dia haseho avokoa ny asan'ny olona rehetra; fa ny andro no hampiseho azy, satria haseho amin'afo izany andro izany, ka dia hozahan-toetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra.» -1 Kôr. 3:13.
Efa antomotra ny faran'ny zavatra rehetra. Manetsika ny sain'izay rehetra misokatra handray ny fiasan'ny Fanahiny Masina Andriamanitra. Mandefa iraka Izy mba hitondra fampitandremana eny amin'ny faritra rehetra. Mizaha toetra ny fanoloran-tenan'ny fiangonany Andriamanitra sy ny fahavononany hankato ny fitarihan'ny Fanahy. Tokony hampitomboina ny fahalalana. Tokony ho hita mihazakazaka etsy sy eroa ny mpitondra hafatry ny lanitra, mitady ny fomba rehetra hampitandremana ny olona ny amin'ny fitsarana ho avy, sy maneho ny vaovao mahafalin'ny famonjena amin'ny alalan'i Jesôsy Kristy Tompontsika. Tokony hasandratra ny fanevan'ny fahamarinana.
Manetsika ny fon'ny olona ny Fanahin'Andriamanitra ka ireo izay manaiky ny fitaomany dia ho tonga fahazavana eo amin'izao tontolo izao. Hita hatraiza hatraiza izy ireo mampita amin'ny hafa ny fahazavana izay efa noraisiny tahaka ny tamin'ny fotoana taorian'ny filatsahan'ny Fanahy Masina tamin'ny andro Pentekôsta. Arakaraka ny namelan'izy ireo ny fahazavany hamirapitratra no vao mainka nandraisany fatra bebe kokoa hatrany tamin'ny herin'ny Fanahy. Voazavan'ny voninahitr' Andriamanitra ny tany.
Indrisy anefa, sary mampalahelo no hita! Ho very eo amin'ireo izay tsy mety milefitra amin'ny fitaoman'ny Fanahy Masina ny fitahiana noraisiny tamin'ny fotoana nanekeny ny maha-avy any an-danitra ny fahamarinana. Tafalatsaka anaty fombam-pivavahana mangatsiatsiaka sy tsy misy aina izy ireo, tsy mahaliana azy ny fanahy eo an-dalam-pahaverezana, efa "nafoiny ilay fitiavana voalohany". Izao no tenin'i Kristy aminy: "Koa tsarovy izay nitoeranao fony tsy mbola lavo, dia mibebaha, ka manaova ny asa voalohany; fa raha tsy izany, dia ho avy aminao Aho ka hamindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany, raha tsy mibebaka hianao" - Apôk. 2:5. Hesoriny amin'ny fiangonana ny Fanahy Masina ka homeny ho an'ny hafa izay mankasitraka Azy.
Tsy misy porofo lehibe kokoa mikasika ny tsy fankasitrahan'ireo efa nandray ny fahazavana lehibe an'izany fahazavana izany, mihoatra noho ny fandavany hamela ny fahazavany hamirapiratra eo amin'ireo ao anaty haizina. Etsy an-danin'izany anefa ny fanokanany ny fotoany sy ny heriny hankalazana endrika sy fombam-pivavahana ivelambelany ihany. RH, 16 Jolay 1895.